कांग्रेस नेता सिटौलाका छोराको विहे : जन्तीको मुखमा मास्क, हातमा सेनिटाइजर ! – Online Nepal
कांग्रेस नेता सिटौलाका छोराको विहे : जन्तीको मुखमा मास्क, हातमा सेनिटाइजर !
April 27, 2020 327
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका छोरा श्यामप्रसाद सिटौला आइतबार विवाहबन्धनमा बाँधिए । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र त्यसमाथि लकडाउनका कारण सीमित जन्तीकाबीच विवाह सम्पन्न भएको हो ।
आइतबार अक्षय तृतीयाका दिन बिर्तामोडकी मनिषा विमलीसँग श्यामले बिहे गरेका हुन्। विवाहमा सहभागी भएका सबै जन्तीहरुले मुखमा मास्क लगाएका थिए भने हातमा सेनिटाइजर पनि बोकेका थीए । विवाहमा सामाजिक दुरी पनि अपनाइएको थियो ।
बिहेमा आफूसहित चार जना जन्ती र दुलहा एउटा गाडीमा गएको नेता सिटौलाले बताए। दुलहीका घरमा पनि १० जनामात्रै भेला भएको उनले जानकारी दिए ।
समयपरिस्थिति अनुसार धुमधाम गर्ने बेला नभएकाले सोही बमोजिम विवाह सम्पन्न भएको उनले बताए । सिटौलाका छोरा श्यामले बिहे खर्च कोरोना कोषलाई हस्तान्तरण गरे । उनले स्थानीय सरकारको कोरोना कोषमा पाँच लाख रुपैयाँ राखिएको जानकारी दिए ।
यसअघि नै विहेको मिति तय भइसकेका कारण तोकिएकै मितिमा बिहे गरिएको नेता सिटौलाले बताए ।
Prevलकडाउनको बेला धेरै मुल्य लिएर ठगि गर्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई रु तीन लाख जरिवाना
Nextहेर्दा हेर्दै चितामा जलिरहेको शव बाढीले बगायो, मलामीको भागाभाग (भिडियो सहित)